နေအိမ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလော့ဂ်ရှာဖွေထိပ်တန်းအလုပ်ရှာအွန်လိုင်းအမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအစည်းအဝေးမိတ်ဖက်အစီအစဉ်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုဖွင့်ချော်နေရာတရုတ်အမျိုးသမီးတွေကိုအမွေအစဉ်အလာခေါင်းစဉ်များ၏အကျင့်သီလရှိပြီအစားထိုးအားဖြင့်ရိုးရှင်းခြင်း၏ရှေ့အမျိုးသမီး။ အထူးနှင့်ပြင်ပအင်္ဂါအဖြစ်အတြင္းဖြစ်စဉ်းစားခဲ့စံပြနှင့်စင်ကြယ်။ ငါသည်ငါ့အတက်အကျ၊နှင့်စာဖတ်ခြင်းကျေးဇူးတင်ပါသည်ငါ့ရို။ ငါလာလိုက္။ ငါကြင်နာခြင်း၊ရိုးသားသော၊အကျွမ်းတဝင်၊တာဝန်ရှိသော၊ကောင်းစွာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်း၊ဆီလျော်ခြင်း၊ဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊အချစ်၊၊အေးအေး၊ဖော်ရွေ၊။ ငါစွဲမှခရီးသွားလာ၊ငါအကောင်းဖက်ရှင်ကျပါတယ်။ ဤအရာအားလုံးကိုကိုက်ညီအလွန်ကောင်းစွာသို့ငါ့အားခန္ဓာကိုယ်။ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်၊ခရီးသွားဖော်။
သတင္းစည်အလင့်ထားသည်-စိုက္-ဝတ္ထုရေးပလက်ဖောင်းနှင့်သိကောင်းစရာများအကြောင်းအရာ။ အများ၏ထင်မြင်ယူဆချက်အလက်စည်စာရေးဆရာများမှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်။ အင်တာနက်ကျေးဇူးကြောင့်ရန်လွယ်ကူသောဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှာတွေ့ အာရှမင်းသမီးအဘို့အရှာဖွေနေအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများ။ ဒီနေရာမှာအချို့ဆိုဒ်များကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာအာရှမင်းသမီးကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ တရုတ်အမျိုးသမီးများလောလောဆယ်တွင်အကြားမြောက်မြားစွာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တဲ့အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများတွေ့ဆုံပြီးစကားပြောနှင့်အတူအာရှအမျိုးသမီး။ သော်လည်းရှာဖွေနိုင်တရုတ်အမျိုးသမီးများအပေါ်အများဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊အမျိုးသားကျိန်းသေချင်တယ်ဖြည့်ဆည်းဖို့တရုတ်အမျိုးသမီးများကိုမကြာခဏနှစ်သက်တဲ့ဆိုဒ်ပါဝင်သောသီးသန့်အရည်အသွေးကိုတရုတ်အမျိုးသမီး။ ဒါဟာသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးဆုံးတရုတ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များရှိရာတရုတ်အမျိုးသမီးနှင့်အတူစကားပြောအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများ။ အချိန်၏အရေးအသား၊ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာ၏အမျိုးသမီးတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ဗီဒီယို။ ဤသည်အများကြီးမင်းသမီး၊သင်အကယ်စင်စစ်ရှာဖွေတရုတ်အမျိုးသမီး၏အိပ်မက်များ၏အများစုကအကြား၊အများအပြား။ ကံမကောင်းစွာ၊တရုတ်နိုင်ငံဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ရန်အများဆုံးအငြင်းပွားဖွယ်အာရှချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အဖြစ်ပေးဆောင်သင်အခကြေးငွေကောက်ခံပုံစံပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာမှသူတစ်ဦးဖြစ်သွားခံရဖို့အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့တရုတ်အမျိုးသမီး။ သို့သော်၊အမှားတစ်ခုခုနှင့်အတူ။ အနက်အမျိုးသမီးအဘို့အမဲလိုက်တရုတ်နိုင်ငံတက်အဆုံးသတ်မည်၊ကုန်ကျငွေအများကြီး။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊ငါနှစ်သက်သောဆိုဒ်များနှင့်အတူပုံသေကောက်ခံခြင်းနှင့်ငွေတောင်းခံအဖိုးအဖြစ်ချယ်ရီပွင့်သို့မဟုတ်တရုတ်အချစ်။ အမျိုးသမီးချိန်းတွေ့တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ဗီဒီယိုများမှာလည်းအများအားဖြင့်အံ့သြဖွယ်အလှနှင့်တရုတ်နိုင်ငံဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ပြီဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးစုဆောင်းအမျိုးသမီးများ-ကြောင့်စုဆောင်းနိုင်။ ဒါကြောင့်၊အားလုံးသူတို့ရဲ့အမှားတွေ၊အခက်မှကွာနေရန်တရုတ်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ကုမင်းသမီးလည်းရှိ၏ကြီးမားသောအရေအမျိုးသမီးပရိုဖိုင်း။ ကတည်းကအခြေစိုက်စခန်းများအီလက်ထရောနစ်သြင္းဘူတာတရုတ်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်အတော်လေးစျေးကြီးရေရှည်မှာအတွက်။ ဒါပေမယ့်ဆိုက်အသုံးပြုခြင်းရဲ့ဘာသာပြန်အသုံးဝင်နိုင်လျှင်သင်ရုံစတင်ရှာဖြည့်ဆည်းရန်အာရှမင်းသမီး။ အခါသင်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်၏ဖြစ်စဉ်နှင့်အတူရှာဖွေသတို့သမီးကနေအာရှ၊အဘယ်ကြောင့်မငှားရမ်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာပြန်။ ထွက်ခွာများအတွက်စျေးပေါဘာသာပြန်။ ငါမကြာသေးငှားရမ်းထိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်ဘာသာပြန်အလုပ်လုပ်သောသူအားဖြင့်ဤဝက်ဘ်ဆိုက် ဆိုက်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးအဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခကြေးငွေ။ မနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှတစ်ဦးအထူးသဖြင့်နိုင်ငံ၊ဒါကြောင့်ချယ်ရီပွင့်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းတွေ့ပြီးစကားပြောနှင့်အတူအာရှမင်းသမီး။ ရှိပါတယ်မင်းသမီးဖြစ်ကြောင်းမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူချယ်ရီပွင့်မှကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများ။ ဆိုက်အကြားအလွန်ရေပန်းစားအာရှမင်းသမီးလုပ်လိုသူတစ်ဦးတည်းသာရှာ၏အနောက်ပိုင်းလူကို၊တစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအပေါ်မူတည်။ ချယ်ရီပွင့်သည်ကောင်း၏၊ကောင်းစွာတည်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မြစ်ဖျားခံသောအရှည်လျား-တည်ထောင်ခဲ့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အမိန့်မင်္ဂလာဆောင်။ သို့သော်၊ဆိုက်ရဲ့ဒီဇိုင်းအစားညံ့ဖျင်းသော။ အဖြစ်နှင့်အတူအခြားဆိုက်များခွင့်ပြုသောမင်းသမီးများအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်၊အခမဲ့အများကြီးရှိပါတယ်လိမ်လည်ခံရဖို့ဒါကြောင့်သတိထား၏။ အပြင်လိမ်လည်၊ဒါကတစ်ပင်ပိုကြီးပြဿနာနှင့်အတူတည်ရှိသည်။ ဒီနေရာမှာကိုယ့်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်မင်းသမီးအတွက်ရိုးရိုးသားသားဖြစ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခြေအနေ၊သို့မဟုတ်အကြောင်းမင်းသမီးနေသောလုံးဝကာက္မ်ားေလက်ထပ်ဖို့အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများ။ သိသိသာသာ၊ချယ်ရီပွင့်များမှာ တစ်စျေးပေါတဲ့နေရာကိုအသုံးပြု၊ဒါပေမယ့်မအချို့၏အာမခံနှင့်အတူဆက်စပ်အပိုပြီးစျေးကြီးအာရှကိုမိတ်ဆက်။ အာရှအနမ်းအခြားနေရာအများအပြားရှိပါတယ်ရှမင်းသမီးသူလိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အနောက်တိုင်းယောက်ျား၏သူတို့ရဲ့အိပ်မက်။ အာရှအနမ်းနှင့်အတူအထူးသဖြင့်လူကြိုက်များဂျာမန်အမျိုးသားများ။ ရှိပါတယ်ၾကယ္လွလာတဲ့အာရှနိုင်ငံကအာရှအနမ်း၊မိန္းကေလးလေ့လာရန်အဓိကအားဖြင့်တရုတ်၊ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်ထိုအသံ၏ဤအအထူးသဖြင့်အာရှချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊ထို့နောက်တခြားအစားထိုးနည်းလမ်းများကိုရှိပါတယ်။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အာရှမင်းသမီးအပေါ်ကြီးမားရေပန်းစားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကဲ့သို့ကစားနှင့်ကြီးငါး၏။ သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်အများ၏စိတ်ကူးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊ထို့နောက်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအချိန်းတွေ့ဖို့အာရှမင်းသမီးဖြစ်ဖို့အသုံးပြုချိန်းတွေ့။ ကောင်းသောအရာတစုံတခုကချိန်းတွေ့မီးမှတစ်ဆင့်ချိန်းတွေ့အေဂျင်စီဖြစ်သောအေဂျင်စီအလေ့အများကြီးပိုကောင်းပြုနောက်ခံအရောင်စစ်ဆေးမှုများအတွက်မင်းသမီး။ သင်သည်လည်းကိုင်တွယ် ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊လွှဲပြောင်းနှင့်အခြားအကူအညီသင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်အတွက်အသင့်ရဲ့ရှာဖွေရေးရှာဖွေဖို့အာရှသတို့သမီး၏အိပ်မက်များ၏။
အဲတစ်ခုကြမ်းတမ်းသောလူဦးရေအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၊၏သင်တန်းအများအပြားဤလူအခုတော့အွန်လိုင်းနှင့်အစောင့်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့သင်အားဖြင့်ဒီပျော်စရာစကားဝိုင်း။ မှတ်တမ်းမှာစကားပြောခုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် ၊တရုတ်ခငျြဘူးဆိုရငျဖို့တနင်္ဂနွေသုံးဖြုန်းမည်သည့်ပိုတည်း၊သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်မွေ့လျော်အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏အထူး။ မှတ်တမ်းအတွက် တရုတ် ။ အခါသင်ဒီမှာလာပြီး၊တစ်ခုခုကိုသင်တိုက်ရိုက်ဤအရပ်ဌာန၌၊ဒါမှမဟုတ်သင်၌စိတ်ဝင်စားကြအကောက်ခွန်နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အသက်ရှင်သူကလူရှိပါတယ်။ ဒါေၾကာင့္အခု။ လျှင်အမှုအရာထဲကတစ်ခုသင်ကြိုက်အများဆုံးအဖြစ်အစည်းအဝေးကနေလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့၊ဥပမာအားဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း၊သင်လိုချင်တာဘယ်မှာသင့်ရဲ့စကားပြောဖော်ရန်လာ။ စကားပြောလျှင်သင်ချင်ကြပါဘူးဆုံးရှုံးဖို့တစ်မိနစ်နေဖို့၊ရှန်ဟိုင်း၊ဤအံ့သြဖွယ်မြို့တော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံ၊၎င်း၏မြို့သားတို့၊ထိုအခါသင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်အတွေ့အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေအရပ်မှအတွက်ဤ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန် အတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၊အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်ဆဲဘဝရှိပါတယ်နှင့်နိုင်သူအဘယ်အရာကိုသင်ပြသည်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းဤမြို့ရှိပါတယ်။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တစ်စုံတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်၊အထူးသဖြင့်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကဘဝတွေကိုသို့မဟုတ်အသက်တာအတွက်ဘေဂျင်း(၏နေထိုင်သူများကိုမြို့တွင်း၌တည်ရှိပြီး၊တရုတ်နိုင်ငံ)၊အလုပ်လုပ်ကိုင်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ထားခဲ့အမြှောက်နှင့်စစ်ဆေးသည်။ တို့တွင်နေထိုင်သူများ၏၊တရုတ်နိုင်ငံ၊ကွောငျးသငျသညျရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အခြား။။။။။ ပါက သင်တို့သည်နောက်တဖန်မစောင့်ဆိုင်းချင်အချိန်တွင်အပင်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ၊ဤစကားပြော။ စဉ်သွားရောက်လည်ပတ်ဝမ်? သငျသညျမေတ္တာ၌ပြိုလဲနှင့်အတူဤမြို့၊၎င်းမြို့နှင့်ပြည်သူ့? လည်းဒီစကားပြောသင်တွေ့ဆုံရန်မှလူရှိ(နှင့်အခြားမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံ၏)။ သွားနေတယ်ဆိုရင်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုဩပ်ယန်၊ဤမြို့၌တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ၎င်း၏မြို့သားတို့၊အဘယ်ကြောင့်မကြည့်တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်စိတ်ဝင်စားနိုင်သူသင်မြို့၊အဖြစ်သင်စောင့်ရှောက်စေကုမ္ပဏီရဲ့။ သို။ ဒီအလုပ်လုပ်တယ်၊ဒါကြောင့်ကြာကြာထက်ပိုဖြစ်သင့်။ သင်ချင်ချက်တင်နှင့်အတူသင့်သူငယ်ချင်းများ၊သင်မူကား၊အချိန်မတှေ့နိုငျ? ထိုအခါပျော်စရာရှိသည်နှင့်တကွလူမွပယ္ခ် ၊တရုတ်နိုင်ငံ၊သင့်အိမ်ကနေ။ တယောက်တည်းသာဖြစ်ခြင်းသည်ကောင်းနှင့်သင်လိုအပ်သော၊ဒါပေမယ့်အကယ်၍လူတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်လုံးဝအထီးကျန်မှအခြားသူများ၊တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီ။ ဆိုရင်ကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်း၏တစ်ဦး ရပ်တန့်၊အခုက။ လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်ဒီ နှင့်အတူမိတ်ဆွေများစေပါ ၊တရုတ်နိုင်ငံ။ သူလူများစွာရှိပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊သင်မူကား၊မပြုလုပ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုပြုပါဒါကြောင့်။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာအတွက်၊လိပ်စကားပြောပါစေ၊အသစ်အတွက်မိတ်ဆွေများ ၊တရုတ်နိုင်ငံ၊မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲ၊သင်ကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာသင်ပျော်စရာရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကမကြိုက်ဘူးရုပ်ရှင်များတယောက်တည်း၊ယခုမူကားသင်သည်တစ်ခုတည်းတစ်ဆင့်ချစ်ကြည်။ ဘူးပေါ်သွားလို့။။။။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်ပြည့်စုံသော ၊တရုတ်နိုင်ငံ၊သင်အနီးတွင်ဖာ။ လျှင်သင်ရှိသည်မကြာသေးမီရွှေ့ပြောင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက် ၊တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ရုတ်တရက်မပါဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့သူငယ်ချင်းများ၊တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့လုပ်သူများအတွက်ဤအထူးနေရာအပြည့်အဝအ၏။ ပူးပေါင်းချက်တင်။ သငျသညျအယူအချိုးမှသင်၏နှစ်အနည်းငယ်ပြီးသတိပြုမိပါတယ်ကွာပြောင်းရွှေ့ထံမှသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်း? ကောင်းပြီ၊ငါ့ကိုသငျပေးပါရစေအချို့သောအကြံပေးချက်များ:ကြိုးစားနေသည့်အခါကူးပြောင်းဖို့မိတ်ဆွေဟောင်း၊ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္သူတို့ကိုလုပ်သူတွေလည်း။ သို။
အခမဲ့မိုဘိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်:ဒီစမတ္ဖုန္းချက်တင်ခဲ့ပြီးဒေါင်းလုပ်အားဖြင့်လူသန်းပေါင်းများစွာအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၊(အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းဟုခေါ်သည်)၊ဒါကြောင့်ကမ်းလှမ်းအခမဲ့ချက်တင်အုပ်စုချက်တင်အပေါ်အကူးအပြောင်းမှအမတ်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းပန်းသီးအပေါ်လုပ်ပါဖုန်းသို့မဟုတ် ၊စသည်တို့ကို။ ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအင်္ဂါ၊သတင်းစကားအတွက်ပုလင်းရေပေါ်၊မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ၊သမုဒ္ဒရာ၊အချို့ပုလင်း၊ခွက်၊မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အတူ၊ဤသူမက်ဆေ့ခ်ျကိုရေးထားလျက်ရှိင့္ခ်က္ျဖင့္- သုံးပြုသူများအနှံ့ကွန်ယက်၊အသီးအသီးအသုံးပြုသူရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အတုဒစ္ဂ်စ္တယ္ပုလင်းမှဖတ်မည္၊သင်ရေးသားစေခြင်းငှါ၊မှတ်ချက်များအတွက်ပြီးတော့ပေးပို့တဲ့စာအသံုးျပဳသူမ်ား၏ရေးသားခဲ့သည်သောသူအပေါ်ထိုပုလင်း၊ထို့ကြောင့်ကစတင်ခဲ့သည်အတွင်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အသုံးပြုသူများအကြားမှာရေးတဲ့စာထဲမှာထားလေ၏တစ်ပုလင်း၊အပစ်အတွက် သွင်သမုဒ္ဒရာနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများရွေးချယ်အတုတခုထဲမှာ၊ပုလင်းဖွင့်လှစ်ဝမည္၊ပြန်ကြားချက်၊ဒါကြောင့်အပေါ်။ အတွက်တောင်ကိုရီးယား၊အရာထွက်ကစားခမဲ့ပဳႏိုင္သည္ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှ၎င်း၏အသုံးပြုသူများ၏ခုခံရေးနေသော်လည်းဒေသခံကွန်းအော်၊အနာဂတ်ရူပါရုံကို(ဒေတာစိတ်ကူးယဉ်)တက္ကသိုလ် ၊ဖင္လန္၊သာဂရမ်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းများအတွက်ထိုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ် ၊နောက်ဆုံးအဆင့်။
နောက်ပိုင်းတွင်၊ကျွန်တော်သေချာမဘယ်မှာကြည့်ဖို့အမျိုးသားများအဘို့အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ငါ၏ကလပ်အသင်း။ ယောက်ျားတွေသာလိုတညဉ့်ရပ်တည်ချက်နှင့်အချိန်အများစုမှာသင်မနေဒါမူးကအေးစေချင်တယ်၊ပိုပြီး၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊ဒါပေမယ့်ကောင်လေးသင်သည်ချိန်းတွေ့တစ်ခါတစ်ရံတွင်အတူပျော်ရွှင်စရာရှိသည်ငါလုံလောက်တဲ့ဟောင်းမကိုးကွယ်အားကိုးဖို့တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတစ်ဦးရည်းစားအခုအချိန်မှာ။ ေျပာသည္။”အဆိုပါပြဿနာကိုရှိသည်သောပဋိပက္ခအခြေအနေ။ သူတို့ပြောချင်တဲ့အတွေ့ဆုံရန်ပါဘူး၊ကိုယ့်ရရန်ကြိုးစားနေအတွက်အသင့်ရဲ့ဘီမ်ား၊ သို့သော်သင်သည်လည်းသင်ချင်ကြပါဘူးအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အဆိုပါစံပြရှိသည်နိုင်သင်နေ့စွဲနှင့်အချိန်ဖြုန်းရက်အနည်းငယ်နှင့်အတူ။ အစအဦး၌၊သင်အလိုပြုမူသူတစ်ဦးပျော်စရာကောင်းသည်၊ဒါပေမယ့်မသိပ်ပျော်စရာ။ အဘယ်ကြောင့်သင်တိုက်ချင်သောကြောင့်လည်းအများကြီးအဘယ်အရာကိုသင်ဖို့ဟန်ချင်၊ပိုပြီးတစ်ခုခုထက်နှစ်ရက်စွဲများ။ ချိန်းတွေ့ခြင်းခက်ခဲသည်၊ဒါပေမယ့်ပင်ခက်ခဲကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောလူရှိတယ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူးဆိုတာသိချင်ကြပြီး၊ပျက်။ ဒီပို့ရောထွေးမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်၎င်းပင်ကြီးကိုဖို့ပိုပြီးလူအတော်များများအဘယ်သူသည်ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ကဲ့သို့ ကြက်ချိန်းတွေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ။ ဒီအဖို့အခွင့်အလမ်းကိုတစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုပြီးလျှင်သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်တစ်ခုခုရှိချင်မှယူမှလာမည့်အဆင့်အထိ။ အဘယ်သူမျှမအုပ်ချုပ်သောသင်ရက်စွဲသင်အလိုမဟုတ်လျှင်နေ့စွဲဖို့တစ်ခုခုအနက်၊သို့သော်၊ဒါကြောင့်အပြောင်းအလဲမျိုးကိုသင်ချိန်းတွေ့ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်၊သငျသညျမတော်တဆခဲအချို့ယောက်ျားတွေကဆင်းထိုဥယျာဉ်ကိုလမ်းကြောင်းအခါမသိရပါဘူးသင်သည်အဘယ်သို့ချင်တယ်။ နောက်သူသိရတာက သူမထင်သင်အမှန်တကယ်သူ့ကိုကြိုက်ချင်တယ်တစ်ခုခုအထူးထည့်သွင်းစဉ်းစား၊သူတို့ထိုသို့ပြုပြီးနောက်နှစ်ဖြစ်သည်။ အမ်ိဳးအတော်လေးစာသားအတိုင်း။ လျှင်သူလှည့်ဝိုက်သောအားဖြင့်သူကဖြစ်ချင်ယူ၊သူလိမ့်မည်များအပြားရက်စွဲများနှင့်သူပျော်စရာရှိသည်၊သူသည်သူတို့ကိုကုသ။ အပိုင်း-လျောက်ပတ်သောယောက်ျားသည်မည်၊အလုပ်ရုံများ၊ဒါပေမယ့်သာမန်သူတစ်ဦးသည်လူအကြားတစ်ဦးကအမျိုးသမီးဆိုသူမပဲလိုပျော်စရာရှိသည်၊သူသည်နားထောင်မည်သို့သင်ကဲ့သို့ရှည်လျားသင်မင်းများထဲမှတစ်ခုနှင့်အပေးဖက်အခွင့်အလမ်း။ ၏အစိတ်အပိုင်းငါ့ကိုခံစားရလျှင်ပင်၊ဒါကြောင့်အနှောက်အယှက်သည့်အခါ၊သင်ထင်ချင်မှသိကြ၏အရောင်သင့်ခံသင့်ထက်ပိုချင်၊သင်သိလျှင်သင်လိုချင်တာအားလုံးပျော်ရွှင်စရာနှင့်အချို့သောချိန်းတွေ့၊ဤဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ အလုပ်၏ပမာဏကိုအကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်အမျိုးသားအချိုးကျဖြစ်သင့်သည်အမျိုးချိန်းတွေ့ချင်တယ်။ အားလုံးသင်အမှန်တကယ်ပြုချင်သည်ပျော်ရွှင်စရာများ၊ရက်စွဲများအပေါ်သွား၊ငါမဟုတ်လှည့်မြို့ဇောက်ချရှာဖွေနေများအတွက်အလားအလာ။ ငါသည်အကြည့်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူယောက်ျားတွေသိတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ ဒါပေမယ့်သင်ကရှိသည်ဖို့ဘာကိုဆုံးဖြတ်။ လျှင်သင်ယူချင်ကြပါဘူးအရာတစ်ခုခုလည်းအလေးအနက်၊ဒဏ်ငွေ။ ကိုအပေါ်ထွက်လမ္း၊ပျော်စရာရှိသည်နှင့်အမည်၏အစောင့်အပေါ်၊တစ်တစ်ခုတည်းအတွက်မြို့မှပျော်စရာရှိသည်နှင့်ရှောင်ရှားတစ်ခုခုကိုအလေးအနက်၊တစ်တစ်ခုတည်းအတွက်မြို့ရှောင်ရှားတာဝန်ဝတ္တရားများ။ ဒီအဖြစ်ပျက်အပေါင်းတို့သည်အချိန်၊သင်သို့ရနိုင်ကောင်းတဲ့အချစ်အလေ့အကျင့်မပြုလျှင်အာရုံစိုက်ဖို့သင်မည်သို့စီမံခန့်ခွဲသင့်ရဲ့လူပျိုဘဝနဲ့ဘယ်လောက်သင်ခွင့်ပြုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲဆောင်ခံရဖို့သို့မဟုတ်လွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့်အသင်ယောက်ျားတွေတွေ့ဆုံရန်။ တစ်နေရာမဟုတ်အစဉ်အမြဲရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏အဘယျသို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်သွားလုပ်နေတဲ့၊ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်၊သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်အမျိုးအစားလူတစ်ဦး၏သငျသညျမကြာသေးမီကတွေ့အရပ်တို့ကိုမသင်သွားပြောင်းနေရာ။ ရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတွေ့ဆုံရန်လူတို့အလုပ်မှာဖြစ်၊ငါလုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှင့်အခြားစာဖတ်သူတွေသိရန်မဖြစ်အရေးပါသူတို့နှင့်မှတိုက်ရိုက် အိမ်မှာ။ မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့နှင့်တစ်ဦးတစ်ယောက်လက္ခဏာများမှာပျော်စရာနှင့်အနိုင်ပေးအမြန်ပြုပြင်အပေါ်အထီးအာရုံစိုက်။ သတိထားပါ၊စဉ်းစားအတွက်အပူနှင့်အတူသူတို့အဖြစ်တာသင်လုပ်နိုင်အဖြစ်၊ဒါကြောင့်အလွန်အမင်းတောင်းဆိုမှုများနှင့်သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်အပေါ်အာရုံကိုဆွဲဆောင်။ အစည်းအဝေးအကြောင်းလူတွေကိုသူတို့ဝါသနာနှင့်အကျိုးစီးပွားအမြဲအကောင်းဖြစ်ပါသည်သင်ပြီးသားရှိသည်ကြောင့်ဘုံမြေပြင်၊ဒါပေမယ့်ပင်ပိုအရေးစောင့်ကြည့်နေတာပါလျှင်သင်အလားအလာမိတ်ဖက်။ အနုပညာပြခန်း၊ ၦာန္ေ၊စပျစ်ရည်ကိုအရသာ၊ညနေအတန်း၊အထက်တန်းကျောင်း(သင်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ပြေနောက်မှ)၊ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်(ရှာဖွေနေမဲ့၊အမြိုးသားသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုအတွက်ခန်းမ၌ယောက်ျားအများကြီးအပြေးနေကြတယ်ပတ်ပတ်လည်)၊ချေးခွေးရှိသည်မပြုလျှင်၊နှင့်ပန်းခြံထဲတွင်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်အချို့သောအားကစား။ ငါကြီးမားတဲ့ပရိတ်သတ်ဘူးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏၊မခွဲခြားဘဲအသက်အရွယ်ရှိပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊၊ပိုပြီးမုသာနှင့်ယောက်ျားသူဖြစ်ဟန်သာအခါ၊သင်အမှန်တကယ်တစ်ရည်းစားသို့မဟုတ်ဇနီး၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်သင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်အတွက် ။ သင်တို့အဘို့အစုံလင်တို့သည်ဤညစာကိုအပိုင်းပိုင်းကောင်း၊စားနပ်ရိက္ခာ၊ဝိုင်၊လူတစ်စုအဘယ်သူဖြစ်နိုင်အေးခဲနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ ဒီလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါ့အကြံဥာဏ်ကိုသင်ဖို့ဘာလိုချင်ထွက်ရှာတွေ့။ ကိုထိန်းညှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များအညီ၊သင်ဘာလိုချင်အတူ၊ထိုအခါအကြောင်းစဉ်းစားအဘယ်သို့အဲဒီလူတွေလိုချင်မှသင်တဲ့စွမ်းအင်ကို။ ကိုယ့်ကြောင့်တစ်ဦးကောင်လေးလိုသုံးဖြုန်းဖို့တစ်ညမဆိုလိုပါဘူးသူရသွားတယ်။ ထွက်သွား၊ပျော်စရာရှိသည်နှင့်၊သတိထားပါမျှော်လင့်လူတို့ကိုအလားအလာမိတ်ဆွေအခါသင်ဖြစ်နိုင်ဖို့အပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့တတိယနေ့စွဲ။ ငါတွေ့မြင်နိုင်သည်ဘယ်မှာစာရေးသူထံမှလာ။ အများအားဖြင့်အခါသူကပြန်လည်ရောက်ရှိအဖြစ်ဘွဲ့၊မဖြုန်းချင်ပါစနေနေ့ညတယောက်တည်းအိမ်မှာ၊နှင့်လည်းရှိသည်စေလိုသည်အချို့လူမှုရေးအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်၊နှင့်များသောအားဖြင့်သူ၏အရပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကလပ်အသင်း။ ထိုသို့ပြဇာတ်ကောင်းဂီတနှင့်အစုံ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ကိုရှာဖို့မျှော်လင့်သင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောအဖော်ရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အနားယူရန်၊ ပျော်စရာရှိနှင့်အတူသင့်သူငယ်ချင်းများ၊နှင့်အလျှင်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်း၊ကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အပိုဆု။ ငါ့အတွေ့အကြုံ၊ငါနေဆဲတွေ့ဆုံရန်လိုအပ်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုတကယ်ကြီးမြတ်၊ဒါပေမယ့်ငါတိုသင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှာအစားအစာနှင့်ဂီတပွဲတော်များ။ ဤသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခေါင်းစဉ်။ ငါထင်အဘယ်ကြောင့်နံပါတ်တစ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်အခက်ခဲငါတို့အဘို့အချိန်းတွေ့ဖို့ကောင်းသောယောက်ျားတွေဒါမှမဟုတ်ပင်လျော့နည်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်အကြောင်းအကျွံအချိန်ဖြုန်းနှင့်အပေါ်အာရုံစိုက်။ ညံ့ေအာင္ကို၊နှင့်အမျိုးသားများခံစားနိုင်ပါမှတစ်မိုင်ကွာဝေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ခါကြားလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပြင်အဘို့ရှာသောသူအလွန်ကြီးစွာသောမိတ်ဖက်လျှင်၊သင်ကပင်မျှော်လင့်? အများစုကစုံတွဲများအတူတူလာသောအခါသူတို့ကတိပြုဖယ်ရှားဖို့ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်။ ငါစဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးအရာလုပ်ဖို့တဲ့အခါတည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာ၏နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးပျက်ကွက်နှင့်အဘယ်သို့ထံမှသင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သွားနှင့်ပျော်မွေ့အရာကိုသင်ပျော်ရွှင်စေသည်။ နှင့်အဘို့တစ်ချိန်ကပျော်မွေ့နေကြတယ်ဆိုတာ အထီးကျန်ဆန်။ ကြ်န္ေတာ္တိုလိမ့်မယ်အိမ်ထောင်သည်တွေအများကြီးပိုပြီးရက်ပေါင်းထက်ပိုတစ်ခုတည်း၊ဒါကြောင့်ခံစားနိုင်ပါတယ်နေစဉ်။ အဖြစ်အဘို့အချိန်းတွေ့၊ယောက်ျားလေးများ၊ဒါပေမယ့်ငါပြောချင်ကြောင်းကိုသင်သိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရည်အသွေးအဘို့ရှာကြသည်တစ်ဦးသည်လူအဖြစ်အထွေထွေအာရုံစိုက်။ ငါအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးမားတဲ့စာရင်း၊ဒါပေမယ့်ငါစဉ်းစားနေတာကအမှုလုံးဝမဟုတ်-။ ဒီဘက်ပါ၊သငျသညျအဘယျသို့သိသင့်အဘို့အရှာဖွေနေနှင့်နေ့စွဲတွေအများကြီးပိုပြီးသင့်လျော်သောအမျိုးသားများအဘို့။ ဒါဟာအစဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောလူအဖို့ဆွဲဆောင်မှုသင်သည်သင်၏စံပြမိတ်ဖက်။ ဒါကြောင့်၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တစ်စုံတစ်ဦးချိန်းတွေ့ခဲ့သောသူအပေါ်သစ္စာ၊လူနာနှင့်အမျိုးအစား၊ထိုအခါသင်ရှိသည်လိမ့်မည်အပေါ်မှာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်။ ကောင်းပြီ၊ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ငါသေချာမဟုတ်ခဲ့ဘယ်မှာသို့မဟုတ်ဘာကပါဝင်ပတ်သက်၊ဒါပေမယ့်ဒီအလွန်ကြီးစွာသောကောင်လေးသူပဲငါ့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌၊ချစ်ငါ့ကလေးတွေဘာမှမပြုကြလိမ့်မည်။ သူရဲ့အ ယောက်ျားတစ်ယောက်၊ကောင်းစွာပြီး၊ပျော်စရာ၊လွယ်ကူသော၊ကြီးမားမိသားစု၊လူ၊ရကဒီလို ဒါဟာပျော်စရာင့်ရပြီးပြည့်စုံသောအဖော်၊ပုံစံ၊နှင့်ခင်ပွန်းက၊ဒါပေမဲ့သူရဲ့အနည်းငယ်အဝလွန်ခြင်း၊နှင့်ကျွန်တော်မသေချာလျှင်ငါဆွဲဆောင်နိုင်သူနှင့်လိင်။ ငါပြောကိုမုန်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ဘာလို့လဲဆိုတော့များကဲ့သို့ငါခံစားမိပိုင်မှာသူ၏တုိက္ခန္း၊ဒါပေမယ့်ကရင်ဆိုင်ရမယ့်ကြစို့၊အမျိုးသမီးအများစုဖြစ်ချင်ဆွဲဆောင်ဖို့သူ့ကိုပထမဦးဆုံးအရပျ၌။ ငါရက်စွဲအမှားကိုကောင်လေးအပေါင်းတို့သည်ငါ့အသက်ကို၊ကျွန်မအခုကလေးတွေအတွက်မှားပါဘူး။ ချင်ကြပါဘူးအသက်ရှင်သွားကြဖို့။ ငါလက်ရှိတွင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အ -သင်မူကားဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်အဘယ်သို့ပြုရမည်။ ငါပြုချင်ကြပါဘူးနှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိသည်ငါ၏အရည်းစားအခုအချိန်မှာ၊ငါမူကားမသိလျှင်ငါသည်သင်တို့ကိုအစဉ်အဆက်ချင်မှရနိုင်။ ငါပဲသိချင်လျှင်မည်သူမဆိုထင်ကြရန်ဆွဲဆောင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတြရွိတယ္၊အချိန်ပို။ ငါအံ့ဩခဲ့ကြရတယ်အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အအချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မမြင်အချင်းချင်းမကြာခဏ၊ဒီတော့ကျွန်မစဉ်းစားမိလျှင်မည်ဖြစ်နေ့တိုင်းလျှင်အမှုအရာကွဲပြားခြားနားပါတယ်၊ဒါပေမယ့်မအဖြစ်စိတ်ချယုံကြည်။ အဆိုပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုလက်ဆောင် ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဤဖော်ပြအတွက် သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ၊ဒါကြောင့်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်အစည်းအဝေးလူမျိုးနှင့်ကြွသွားရန်အစည်းအဝေးနောက်ဆုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ သင်ရုံများစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေ။
အတွက်အနီးတွင်ခုနစ်သန်းသောလူဆင္ေတိုက်ရိုက်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်။ အားလုံးကွဲပြားခြားနားသောအသားအရောင်၊မျက်စိပုံစံမျိုးများ၊နှင့်ဆံပင်မျက်နှာပြင်နေစဉ်၊သင်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအတိုက်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနား။ ဟုတ်ကဲ့၊အကြားခြားနားချက် သိသာသည်လူမှ၊ဒါပေမယ့်သူအကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်တို့သည်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း? ယနေ့အချိန်တွင်၊အဆဲကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအကြားနှစ်ဦးမတူညီတဲ့တိုက်ကြီးနှင့်အချိန်ဇုန်အချည်းနှီးဖြစ်၊သေးငယ်တဲ့ရှော့ခ်သာလမ္း။ နေ့တိုင်း၊လူများစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့မှုန်ဝါးလုံးနိမိတ်အတွက်ပျော်ရွှင်၏။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၏အရေအတွက်ကို-ယဉ်ကျေးမှုအထိမ်းတိုးပွါးစေ၊နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှလူများတို့သည်တူ၊ဒါပေမယ့်မျှအားကောင်းတဲ့အမြင်နှင့်ဆန္ဒ၊အောင်မိသားစုများအားကြီးသော။ အများစုကအနောက်တိုင်းအမျိုးသားများကြိုက်တတ်တဲ့ရုရှားအမျိုးသမီးများအတွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၊နှင့်ဤအံ့သြစရာမဟုတ်ပင်အတွက်အနောက်တိုင်းအမျိုးသမီးများကြောင့်၊သင်မတူဘဲ၊ရုရှားမိန်းကလေးများအမှန်တကယ်မိသားစုဖော်ရွေ။ ယနေ့တွင်၊အများစုကအနောက်တိုင်းအမျိုးသမီးဖြစ်လိုသူများအတွက်လွတ်လပ်သော၊င့်သက်သာအဝတ်မပါဘဲအနည်းနည်းလေးမိတ်ကပ်၊အောင်မြင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်၊သွားလာရကြဘူးပူးတွဲဖို့သူတို့ရဲ့ကန့်သတ်သားသမီးနှင့်ခင်ပွန်း။ ဤသည်ရိုးရိုးအဘို့ရုန်းကန်ကျားမတန်းတူညီမျှနှင့်ပင်ပိုမိုဆိုးရွား၊ကိုယ္တိုင္ဟာအမြင်ချင်းနှင့်၎င်းတို့၏။ ဒါကြောင့်အများစုကအနောက်တိုင်းအမျိုးသမီးသုံးဆယ်လွတ်လပ်သော၊ဖိုင်း၊နှင့်ဆွဲဆောင်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ ခပ်သိမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်မုဆိုးအားဖြင့်သဘာဝ၊သူရှာတွေ့ခြင်းငှါအလို၊အသိဉာဏ်။ ရုရှားမိန်းကလေးများ၊မသိ၊ကိုကြည့်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်နှင့်ဆွဲဆောင်ကောင်း၏အာရုံစိုက်။ ဒါဟာအဆင်းလှသဘာဝအားဖြင့်နှင့်၎င်း၏ပုံစံများကိုအလေးပေး၊ဒါကြောင့်ပင်အလင်းအရိပ်နှင့်အရွေးချယ်မှု၏ကြော့ဆင်မြန်းအတူဒေါက်မြင့်ဖိနပ်အလေးပေးဖော်ပြ၏အားသာချက်များကိုကိန်းဂဏန်းနှင့်အတွက်တကယ့်အရေးမပါဘူးဘယ်မှာသွားရန်၊အလုပ်၊အစူပါမားကတ်သို့မဟုတ်ညစာစားအဘို့၊ကိုယ့်အပြောင်းအခါသမယများအတွက်၊ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းကြီးမြတ်လှပါတယ်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အဆင်းလှသောမိန်းမကိုရှာဖွေရန်၊ရုရှားမိန်းကလေးများအတွက်ထောင်များမှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု။ သမိုင်းကြောင်းအ၊လူအခေါင်း၏မိသားစုအတွက်၊ရုရှားအမျိုးသမီးများ၊နှင့်ပင်ယခုအခါလူ့အဖွဲ့အစည်းပြောင်းလဲခဲ့သည်၊အမျိုးသမီးအခွင့်မိမိတို့အမျိုးသားများလွှမ်းမိုးများအပြားကိစ္စရပ်များကို။ သူတို့ အောင်းသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ခွန်အား၊သူတို့၏နည်းနှင့်မခိုင်။ အမျိုးသမီးအတုအမျိုးသားများနှင့်အတူထူးခြားသောအမှုအရာ၊သူတို့ခံစားရယ့်အားကောင်းတဲ့နှင့်အရေးကြီးတယ်။ နှင့်ကျက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြောင်း ၏အင်္ဂါရပ်များရုရှားမိန်းကလေးများ။ လျှင်သင်ဆုံးဖြတ်လက်ထပ်ဖို့ရုရှားမိန်းကလေး၊သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ဖို့အမှန်တကယ်စွဲလမ်းနေသူပါ။ ကိစ္စအများစုအတွက်၊အနောက်တိုင်းအမျိုးသမီးဦးစားပေးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သူတို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောင်မြင်မှုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-လုံလောက်သော၊အစားထက်အပြည့်အဝမိသားစု၊ဆီးတားနိုင်သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်း။ သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ရုရှားအမျိုးသမီးများကိုကောင်းစွာပညာတတ်နှင့်များသောအားဖြင့်တစ်ဦးကောင်းအလုပ်ရှာတွေ့နှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှုန်းလား၊ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကသေချာအောင်သူတို့တစ်တွေမိသားစုရှိသည်နှင့် ပေါင်းစပ်ဤအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ။ ရုရှားအမျိုးသမီးမည်မဟုတ်လုံးဝမပျော်ရွှင်တစ်မိသားစုမပါဘဲ(အချစ်ခင်ပွန်းနဲ့သားသမီး)၊ကိုအောင်မြင်သောအလုပ်ရှိကြောင်းအမြဲတမ်းအနိမ့်အဆင့်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်လက်ထပ်ဖို့ရုရှားအမျိုးသမီးနှင့်ခိုင်ခံ့သောမိသားစု၊သင်မူကားမသိရပါဘူးဘယ်မှာကြည့်ဖို့အတွက်၊သူမသင်နိုင်စွာစတင်သင့်ရှာဖွေအတူအချို့သောချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ သင်အရှာဖွေရေးအတွက်၊ရုရှားမိန်းကလေးများအွန်လိုင်းရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးများသည်သူတို့နှစ်ဆယ်ကျော်အတွက်သို့မဟုတ်ရုရှားအမျိုးသမီးများအွန်လိုင်းရှာချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာတစ်စုံတစ်ဦးကိုအလေးအဟောင်းတွေ။ သင် သင်ပိုကောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရုရှားအမျိုးသမီးနှင့်မွေ့လျော်အတူအချိန်ဖြုန်း၊ငါ့ခံစားအလွ။ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများမှာရေပန်းစားနည်းလမ်းရှာတွေ့ဖို့ရုရှားမိန်းကလေးနေထိုင်ရုရှားသို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်ရုံဖြင့်အဆင်ပြေတဲ့ကိရိယာအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်။ ကဲ့သို့အများအပြားရုရှားနေသောအမျိုးသမီးကောင်းစွာပညာတတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်စကားပြော၊သင်အလွယ်တကူဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူတိုက်ရိုက်သူတို့ကို။ သင်သည်လည်းရောက်၏အချို့ရုရှားဆော့ဖ်အတွက်အသင့်ရဲ့မြို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်ရုရှားအမျိုးသမီးနှင့်အရသိရသူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ။ နီးပါးခပ်သိမ်းသောတိုင်းပြည်နှင့်တိုင်းကြီးတွေမြို့ရှိဒေသကိုရုရှားလူမျိုးအသက်ရှင်သော၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ကမ်းခြေရွတ်ကလင်းအတွက်၊နယူးယောက်၊သို့မဟုတ်ပရိယာယ်တွင်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ကယ်လီဖိုးနီးယား။ ခဲ့ကြလျှင်သင်ပြီးသားအတွေ့အပြားရုရှားအမျိုးသမီးတွေ့ဆုံရန်သူနဲ့စကားပြောဖို့သင်နာရီ၊နှင့်မြင်ချင်သူအတွက်သင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသင်သိမှရကောင်း၏၊နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်လက်ထပ်ဖရိက၏အရှည်နေသောအမျိုးသမီးချိန်းတွေ့၊အနာဂတ်အတွက်နိုင်အောင်ခရီးသွားရောက်ရန်ရုရှားသို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများ။ ဒီ ဒါဟာယူနိုင်ပါသည်အနည်းငယ်နာရီအမှန်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာစွန့်စားမှု။ သင်သိမှရသင့်ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများသွားရောက်ကြည့်ရှု၊နှင့်ဖြစ်ကောင်းပင်အပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံးပြန်လာနှင့်အတူ။ ပဲဘေးဖယ်ထား၏သံသယနှင့်အယူအဆဆီသို့ဦးတည်သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်အနာဂတ်နှင့်အတူအမှန်တကယ်ပြီးပြည့်စုံသောသတို့သမီး။ သင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အခက်မေတ္တာ၌လဲကျဖို့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ၊သင်သိစေခြင်းငှါအခြို့ရှိပါတယ်ကြောင်းကိုယေဘုယျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသင်ကူညီနိုငျသောဤအခြေအနေ။ သင်သည်အဘယ်သို့ထင်ကြဘူးအရေးအတွက်ရုရှားမိန်းကလေးများအပေါ်တစ်ဦးအရက်စွဲ? တူအားလုံးမိန်းကလေးငယ်များ၊ရုရှားမိန်းကလေးတစ်သူမနားကဲ့သို့အကျမသို့ချီးမွမ်းထားသည်၊အထူးသဖြင့်လျှင်၊သူမတကယ်တစ်ခုခုပြောဖို့အကြောင်းသူမ၏ဦးခေါင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာဖစ္ပါတယ္။ မိန်းကလေးများတန်ဖိုးချီးမွမ်း၊ဒါပေမယ့်ပြောကြဘူးသူတို့အားလုံးတစ်ကြိမ်မှာ။ အာရုံစိုက်ဖို့အချို့သောအင်္ဂါ၏ပုံသို့မဟုတ်ပိုကောင်း၊သင်သည်သင်၏နှင့်အရသာသင်တို့၏နည်းလမ်းများ။ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့နေ့တိုင်း။ ထွက်ရှာရန်ကြိုးစားသင့်အကျိုးစီးပွား၊အဘယ်အရာကိုသင်ကြိုက်အဘယ်အရာကိုသင်မကြိုက်၊ဘုံမြေပြင်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ ဆွေးနွေးသင့်နှင့်အတူ။ ဟုသေချာလျှင်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့တစ်ခုခုလုပ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊၊တွန့်ဆုတ်ကြဘူး။ ထိုဘာသာစကားများ၏အသံနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းပေးရန်သင်ပိုပြီးသတင်းအချက်အထက်ကိုယ့်အခြောက်သွေ့၏။ သင့်ရဲ့စံပြနည်းလမ်းသိမှရရန်အသီးအသီးအခြားကောင်းပြီးကြောင်းပြသဒီဟာကတကယ်ကိုအရေးကိုသင်နှင့်သင်ပြုသောအမှုအရာအခြားအမျိုးသားများမဟုတ်။ အားလုံးမိန်းကလေးများမသိဆွဲအကျကောက်ချက်ကနေ၊သင်လူတို့၊နှင့်အတူရိုးသားဖြစ်သူမနှင့်မပေးပါနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အခွင့်အဖြည့်ရန်အတွက်ကြွင်းသောအရာ။ သင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၏စိတ်နှလုံးအနိုင်ရလွ၊သင်သည်အရေးယူနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်။ ဒီရွေ့လျားဆက်ဆံရေးရှေ့ဆက်၊အစီအစဉ်များချမှတ်ပြီးကြောင်း။ မည်သည့်ဆက်ဆံရေးအနုပညာပုံစံ။ သတိရသောသူအပေါင်းတို့သည်အမျိုးသမီးမေတ္တာလက်ဆောင်။ ၏တန်ဖိုးကိုဤလက်ဆောင်အဖြစ်အရေးမပါ။ ရောက်စေပန်းပွင့်သို့မဟုတ်အမိန့်တစ်ပန်းပွင့်ပေးအပ်ခြင်း၊ရုပ်ရှင်လက်မှတ်တွေ(ပင်လျှင်သင်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိ၊သင်သွားဖို့အချိန်တည်းမှာ၊ပြီးတော့အတူတကွအတွက်အဆိုပါရုပ်ရှင်)ပေးတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်လျှင် သင်ကြိုက်ဖတ်သို့မဟုတ်ပင်ကောင်းတစ်ဖန်ခွက်နှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောအပျော်အပါး။ သူမသွားရောက်လည်ပတ်(သူမ၏ကြီးမားတဲ့စိတ်ကူးကြောင့်၊မိန်းကလေးတစ်ဦးချင်ပါဘူးသူတစ်ဦးရေရှည်ဆက်ဆံရေးမှာအကွာအဝေးနှင့်အတိအလာများအတွက်ထာဝ)၊သင်ကြိုးစားသင့်အထင်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင့်ရဲ့အသွင်အပြင်။ တစ်ဦးရှိပါတယ်ကြီးမားသောအပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးစွာသောနှင့်အတူမျက်နှာဆံပင်ရိတ်သို့မဟုတ်အတိအကျကိုတောင်။ အားလုံးအမှုအရာအနည်းငယ်သာပေးပြီးပြည့်စုံရုပ်ပုံလွှာ။ ပြီးလျှင်မိန်းကလေးအတွက်စိတ်ဝင်စားသူမ၏ဆက်ဆံရေး၊သူမခံစားရတဲ့ပထမတစ်ချက်မှာသူမ၏လှုပ်ရှားမှုများ၊အပြုံးနှင့်အသံပေးနိုင်ပါသည်သူမအများကြီးပိုသတင်းအချက်အထက်နှစ်အနည်းငယ်များ၏စာပို့။ လျှင်သင်အချိန်ဖြုန်းအတူတကွလူတစ်ဦးအတွက်၊အလည်အပတ်မဆိုသင့်ရဲ့နိုင်ငံများမှယဉ်ကျေးမှု၊သို့မဟုတ်၊ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ဦးရှည်လျားသောခရီးမှတတိယနိုင်ငံ။ ကြိုးစားတိုင်းအခွင့်အနိုင်ရသင့်ရဲ့နှလုံးနှင့်၊အားလုံးအထက်၊မေတ္တာ၌လဲကျ။ သူမသည်သေချာနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောသဘောထားကအခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်ခုခံတွန်းလှန်ရန်၊ထိုကဲ့သို့သောကောင်းတစ်သူတစ်ဦးနှင့်မေတ္တာ၌ကျရောက်။ တစ်ဦးကမိန်းကလေးလိုပဲပျော်ရွှင်မှုကိုနှစ်သက်ရဲ။ မှတ်မိသမျှသည်သင်တို့လက်၌ရှိ၏၊ဥစ္စာမဟုတ်။ လက်နက်ချ။
လဲလှယ်သည်အရေးအရပ်အသုံးပြုသူများလဲလှယ်ငွေကြေးသုံးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အီး(၊$၊ရေချိုး၊)။ သူတို့ကတစ်ဦးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး”ရေကူးကန်ပိုက်ဆံ”ပါဝင်သောအပေါင်းတို့သည်အခြားဖြတ်။ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုခွင့်ပြုရင်းနှီးလူဆောင်ရွက်ရန်ရက်ရက်ရောရောအဖြစ်ထင်ဟပ်ပြသ၊သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူလုပ်ရပ်တွေမဟုတ်ဘဲစကားလုံးတွေထက်ပို၊ရွေးချယ်ကြည်ထက်သေးငယ်တဲ့ဆွေးနွေးချက်၊နှင့်ပေးသူတို့ရဲ့အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ဖို့ရှိသည်သူတွေကိုဂုဏ်ပြုခေါ်ရတာ။ ဒီနေရာတွင်၊လူတွေအဖုံးအဘို့အသီးအသီးအခြား။ ထိုအခါအကောင်းဆုံးအရာသင်ပြုမပြုဘဲကြီးမားတဲ့သဘောတူ။ အခမဲ့လူမှုသုတေသနနဲ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့။ ထိုအက္ပ္ကိုအသံုးျပဳေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အနီးကပ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်။ ကမ်းလှမ်း၎င်း၏အသုံးပြုသူများ အခမဲ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုပေါ်မှာဝိုင်ဖိုင်၊ဂရမ်နှင့် ။ လိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုအတွက်ရရှိနိုင်၊ နှင့်ဖုန်း။ ဒီအသုံးပြုသူများမှတည်ထောင်ခြင်းနှင့်ချဲ့ထွင်သူတို့ရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးအပေါ်အခြေခံပြီးအလားတူနေရာများနှင့်အကျိုးစီးပွား။ အချို့အင်္ဂါအအက္ပ္ကိုအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်ပညာ၊ကဲ့သို့:အနီးအနားရှိအသုံးပြုသူများ၊အုပ်စုများ၊မက်ဆေ့ခ်ျကိုပျဉ်ပြား၊အဘော်၊အနီးအနားလှုပ်ရှားမှုများ။ အသုံးပြုသူများပေးပို့နိုင်ပါတယ်မာလ်တီမီဒီယာ၊လက်ငင်းစာတိုပေးပို့၊နှင့်ပြဇာတ်တစ်ခုတည်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲဂိမ်းအတွင်းအက္ပ္ကိုပလက်ဖောင်း။ အသုံးပြုသူများအစတစ်ခုဖန်တီး ပရိုဖိုင်နှင့်တိုက်တွန်းမျှဝေဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးသတင်းအချက်။ ရဲ့ထုတ်လုပ်သူပြောခွင့်ပြုသူတို့ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုအလုပ်ပိုပြီးတိကျမှန်ကန်ပွဲနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏အနီးအနား။ ဂုဏ်ယူသည်မြင်ကြပြီမှဝင်္ကတဆင့်မိုဘိုင်းအင်တာနက်အသုံးပြုသူများရှာဖွေသူတွေစိတ်ကြိုက်ဂိမ်းများများအတွက်မိမိတို့အသုံးပြုသူများ။ ေ-ချက်အလက် အများစုဟာဆိုဒ်များကိုအဲဒီနေ့ရက်ကာလအသစ်ပလီကေးရှင်းကြောင်းထပ်မံမြှင့်တင်ဆိုဒ်များ။ အတူတူသွားအတွက်ချိန်းတွေ့၊အားလုံးနီးပါး၏အဓိကချိန်းတွေ့ပလက်ဖောင်းအပင်ပေါက်ပြီပါပြီနှင့်အတူသူတို့အပိုဆောင်းလီေရောက်ရန်မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများနှင့်ယနေ့အထိသင်တက်နှင့်အတူဤနေရာသို့သွားရန်။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအချို့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အပိုဆောင်းပလီကေးရှင်း၊အလွန်ကြီးစွာသောစာရင်းအလှန်လှောကြည့်ရှု၊ပင်ဆိုဒ်အတွက်လိင်နှင့်ရာင္စပ္ေ။ ။ အတူ
အဆိုအရတရုတ်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့အချက်အလက်:လူတွေ့ဆုံရန်သောသူတရုတ်မိန်းကလေးများအွန်လိုင်းနှင့်အစီအစဉ်လက်ထပ်ဖို့တရုတ်အမျိုးသမီးတနစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်ဆိုပါကသူတို့လက်ထပ်တဲ့အမျိုးသမီး သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တရုတ်အမျိုးသမီး၊ထို့နောက်သူတို့ကိုယ့်အတွက်စိတ်ဝင်စားထွက်ခွာမိမိတို့နိုင်ငံသို့မဟုတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေ။ သင်မရောက်မီတရုတ်နိုင်ငံနှင့်မဆံုဖူးတဲ့တရုတ်အမျိုးသမီး။ ဒါကြောင့်အချို့သိထားသင့်သောအရာတို့ကိုသင်အံ့သြနေကြတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာဖို့တရုတ်မိန်းကလေးတစ်သင်တို့ကဲ့သို့၊သို့မဟုတ်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းချိန်းတွေ့အကြောင်းတရုတ်အမျိုးသမီး။ တဦးတည်းကအရမ်းအရေးကြီးတာကသင်သိပါသသင့်ကြောင်းတရုတ်မိန်းကလေးများသည်အကြောင်းအသင်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊တူညီသောအရာသင်ဖြစ်နိုင်ဖို့အသုံးပြုနှင့်အတူဥရောပသို့မဟုတ်အမေရိကန်မိန်းကလေးများ။ ထို့အပြင်အနည်းငယ်အက္ခရာများနှင့်သဲလွန်စနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကမိန်းကလေးကြုံတွေ့နေရသည်စစ်မှန်သောခံစားချက်၊ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု အပြုအမူအပေါ်အခြေခံခဲ့ကြကြောင်းသွတ်အတွက်သူမ၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင်သူမ၏အသက်တာ၏။ တကယ်တော့၊တရုတ်အမျိုးသမီးများကိုသွန်သင်တွင်ပြုမူရန်အချို့လမ်းရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်ကောင်းတစ်ဦးဘဝလက်တွဲဖော်။ သင်ရောက်ရှိသည့်အခါလူကြီး၊ဤအပြုအမူအတွက်စုဆောင်းမိ၏ခန္ဓာကိုယ် သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ၊သင်တကယ်မသိကြဘူးကြောင်းသင်ပြုမူ။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အရာသင်သိသင့်သည်ဟုတရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၊လူအထိမ္းအတွက်ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲ။ သို့သော်၊ဤမဟန့်တားသငျသညျရှိပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊၊ကောင်းသန်းပေါင်းများစွာ၏တရုတ်မိန်းကလေးများနေသောမေတ္တာ၊ဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊စိတ်ရင်းမှန်နှင့်သဘာဝအလျောက်၊အလွန်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အၡမ်ား။ အများစုမှာတရုတ်လူမျိုးများ၏ထင်ချစ်တစ်ခုအဖြစ်အရေးယူ၊မတ။ပ။ ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ကိုချစ်တော့၊သင်ပြောသောအလူတစ်ဦးကယ့်ကိုသင့်ကိုချစ်။ ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ပြောပြကြောင်းတရုတ်မိန်းကလေးကအမှန်တကယ်သင်တို့နှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လဲ။ ပါကတရုတ်မလေးပြောပြကြောင်းဂရုစိုကျ၊သို့မဟုတ်သူမကိုတွေ့၊ဤအကြောင်းအရာတစ်ခုခုသင်အရမ်းလေးလေးနက်နက်ယူသင့်။ အဆိုပါစကားလုံး”ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌”စေခြင်းငှါအလိုလိုခြားယဉ်ကျေးမှုများအတွက်၊ဒါပေမဲ့တရုတ်၌င်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဟု”ငါ”တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်။ ၏ရည်းစားနီးပါးဆက်ဆက်မှရှောင်ကြဉ်အသုံးပြုဤစကားသည်အထိသူမသည်လုံးဝသေချာဘာဆိုလိုတယ်။ တွေ့မြင်တိုင်းစကားလုံး။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ၊သူမသောယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောနိုင်ယခုမွသူမ၏ဆက်ဆံရေးသာအားျ။ အခုဆိုရင်သင်သိသောအတွင်းသင်သည်ဖြစ်နိုင်တယ်၊သဘောမှသူမနှင့်သူမ ၌သင်တို့ကိုချစ်သောသူသင်ထင်ခဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နောက်ထပ်အရာကပြသနိုင်ကြောင်းတရုတ်မိန်းကလေးအနက်ရှိုင်းတဲ့ခံစားချက်ပုံမှန်ထက်ထက်သင်အဘို့စတင်သည်သည့်အခါသူမစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းသင်၏ကျန်းမာရေး။ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုရာက္ရာအမျိုးသမီးတစ်ဦး(အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး)၏စောင့်ရှောက်မှုယူသူမ၏ယောက်ျားရဲ့ကျန်းမာရေး။ များစွာသောလှပသောတရုတ်အမျိုးသမီးလည်းသုံးဖို့ဒီနည်းလမ်းကိုလူအတြက္သူတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားကြ။ ဒီတော့လျှင်သင်ရုံဆက်ဆံရေးစတင်ပြီးသူမစိုးရိမ်ပူပန်မှုပြသသင့်ကျန်းမာရေးအတွက်၊ထို့နောက်သင်ကြိုးစားနိုင်ပါပြောပြသည်ဟုသူမ၏အကယ့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်။ ဒီအခြားအရေးကြီးသောနိမိတ်လက္ခဏာသင်သည်မေတ္တာတရားကိုဖြစ်ကြသည်နှင့်အတူ။ လျှင်မေးဖို့သင်တွေ့ဆုံရန်၏မိဘများနှင့်အတူ၊ထိုသို့သာဆိုလိုကြောင်းသင်လိုလားဆန်းစစ်သူမ၏ပေး၏ခွင့်ပြုချက်။ တကယ်တော့ တကယ်တော့၊သူမပြောသောသင်တို့၌သူမ၏မိဘများဖြစ်ကြသည်”ဒီမှာကိုယ်ချစ်တဲ့သူ၊အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်အတွက်၊”အမှုပျော်ရွှင်နေကြသည်အခါသူမကပြောပါတယ်၊သူမကပြောသင့်မိဘများကသင်ပေးချင်မှသူတို့ကိုတွေ့ဆုံရန်။ သင်သေချာသင်သည်သင်၏တရုတ်ရည်းစားချစ်သင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း။ ဗစ် သည်တရုတ်အမျိုးသမီးသူဘလော့ဂ်များချိန်းတွေ့အကြောင်းတရုတ်အမျိုးသမီးနှင့်ကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့နှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု၌အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများ။ လျှင်သင်ချိန်းတွေ့ကြသောတရုတ်မိန်းကလေးနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအလွန်တက်ကြွစွာလူမှုမီဒီယာ၊ပညာသင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်ၡမ်ားရုရှားမိန်းကလေးများမှလာကြသူမ၏မျက်နှာကိုအတွက်၊သို့မဟုတ်ပဲရပ်တန့်မှအာရုံစိုက်ပေးဆောင်သင့်ရဲ့သတင်းစကားများသောသူတို့အဘို့အချိန်းတွေ့နေသောလက်တင်အမေရိကန်မိန်းကလေးများ၊ငါတို့သည်သင်တို့ဒီနေရာမှာအကြံပြုလို ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများရက်စွဲများသင်ကူညီလိမ့်မည်သိလာအောင်၊ဒီဆိုက်နှင့်၎င်း၏။
အွန်လိုင်းချက်တင်အတွက်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊တရုတ်စိမ်း၊ကြွေ၊ကမ်ချတ်၊ကြွေဗီဒီယိုချက်တင်။ ဤကြွေအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းရှိရာကြွေလူချက်တင်အတွက်အိမ်ကနေအချိန်ကင္မရာကိုကင္မရာ။ တရုတ်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းနှင့်အတူ။ ကတရုတ်နိုင်ငံ:တရုတ္၊တရားဝင်အမည်မှာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊အရှေ့အာရှ။ ဒါဟာလူဦးရေအများဆုံးကမ္ဘာ့နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်အတူရှီ။ အတွက်သန်း။ သာရှိပါတယ်နှစ်ခုတပ်ဖွဲ့များကပေါင်းစပ်၊အကြောက်တရားနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား။ ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြောဆိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ထို့နောက်နှစ်ဦးစလုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအနိမ့်ဆုံးအဆင့်ရှိကတည်းကအတားအဆီးတစ်ခု၏ပုံစံအတွက်ယဉ်ကျေးမှု၊ဘာသာစကား၊အသွင်အပြင်နှင့်ပထဝီ။ ပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောတရုတ်အဂၤလိပ္စရှိပါတယ်၊ကြီးမားတဲ့တရုတ် ကြောင်းလည်းနေထိုင်အတွက်အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံများအဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံ၊အမေရိကတိုက်၊ကနေဒါနိုင်ငံ၊မလေးရှား၊ တောင်အာဖရိကနှင့်အားလုံးနီးပါးကမ္ဘာ၏နိုင်ငံအဘယ်မှာရှိသူတို့အသက်ရှင်ပြီးဟောပြောတယ်လို့ဗမာ။ ဒီနေရာမှာဒီစကားပြောသင်တွေ့လိမ့်မည်သူလူများအဂၤလိပ္စသို့မဟုတ်တရုတ်၊နိုင်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်သင့်စိတ်ကြိုက်သည်နှင့်အညီ၊ပညာတတ်များနှင့်နည်းပညာအဆင့်မြင့်တရုတ်မျိုးဆက်မဏ္ဍိုင်၊အုပ်စုစာသား၊နိုင်ငံခြားစကားပြောအတူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှတရုတ်နိုင်ငံ၊ကင်မရာကချက်တင်၊ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူၡမ်ားမိန်းကလေးများကနေတရုတ်နိုင်ငံများ၊စသည်တို့ကို။
© 2020 ဗီဒီယိုက ချက်တင် ကမ္ဘာကြီး